Nitombo 20% ny habetsahan'ny fividianana zezika mineraly tamin'ny taon-dasa - Journal "Potato System"
Tena vaovao Vaovao Rosiana
в Analytics, Ny fanjakana, vaovao, Vaovao Rosiana
Ny fampitomboana ny habetsaky ny zezika mineraly dia iray amin'ireo asa lehibe amin'ny fampitomboana ny vokatra sy ny fijinjana. Tamin'ny taon-dasa, nividy zezika mineraly 4,68 tapitrisa taonina ny mpamokatra fambolena (araka ny AI), izay efa ho 20% ambony noho ny tamin'ny 2020, hoy ny tatitry ny sampan-gazety an'ny Minisiteran'ny Fambolena Rosiana.
Izany no nahafahana nampiakatra ny haavon’ny fangatahana ho 55 kg isaky ny velaran-tany 1 ha amin’ny salan’isa manerana ny firenena (amin’ny taona 2020 - 50 kg isaky ny 1 ha). Ny fitomboan'ny habetsaky ny fampiharana dia nanampy tamin'ny fijinjana tsara ny voly fambolena lehibe. Noho izany, ny vokatra avo indrindra teo amin'ny tantaran'ny rosiana agro-industrial complexe dia tratra tamin'ny resaka fijinjana ny tanamasoandro, ny soja, ny fanolanana, ny voankazo ary ny voaroy.
Tamin'ny taona 2021, na dia teo aza ny fisondrotry ny vidin'ny zezika mineraly, ny Minisiteran'ny Fambolena Rosiana dia nandray fepetra mba hanomezana ara-potoana ireo tantsaha io loharano io. Natsangana ny foibe hifehy ny famatsiana azy, ary efa nomanina ny drafitry ny fividianana amin'ny antsipiriany ho an'ny vanim-potoana nanomboka ny Desambra 2021 ka hatramin'ny Mey 2022. Ny departemanta, miaraka amin'ny Minisiteran'ny Indostria sy ny Varotra ao Rosia ary ny FAS Russia, dia miasa amin'ny famahana ny olana mitranga amin'ity sehatra ity.
Tags: Mpangotraka mineralyMinisiteran'ny fambolena ny Federasiona Rosianavidin'ny zezika mineraly
Raha ny valin'ny taona 100 dia niditra tao amin'ny Agro-2018 Club ny toeram-piompiana 100 tsara indrindra ao amin'ny repoblika
Buckwheat, siramamy ary ovy voarara ao Kazakhstan